Nagarik Shukrabar - जाडोमा घुँडाको समस्यालाई बेवास्ता नगरौं
आइतबार, ०३ मङि्सर २०७४, ०२ : ११ | शुक्रवार
जाडोमा हातखुट्टाका जोर्नी दुख्नु गम्भीर समस्या हो । एकपटक यस्तो समस्या देखियो भने यसबाट मुक्त हुन निकै गाह्रो हुने अनुभवीहरु बताउँछन् । यसलाई बेवास्ता गर्दा भविष्यमा निकै भारी मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ । जाडोमा नसा खुम्चने, रक्तसञ्चार उच्च हुने तथा मुटुसम्बन्धी समस्या हुने भएकाले हाड जोर्नीमा समस्या उत्पन्न हुन्छ र दुख्छ । कसैलाई बाथ रोग वा युरिक एसिडको समस्या छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई यसले झनै दुःख दिनसक्ने बताउँछन्, सहिद गंगालाल तथा सरुवा रोग अस्पतालका जनरल फिजिसियन डा. शेरबहादुर पुन । उनका अनुसार, घुँडा तथा जोर्नी दुखाइका पछाडि धेरै कारण हुन सक्छन् । आर्थराइटिसको कारण दुख्न सक्छ, बुढ्यौलीमा पनि दुख्न सक्छ । यसबाहेक अरु कारण पनि हुनसक्छ ।
हामीलाई हिँडडुल गर्न, उभिन वा आराम गर्दा पनि दुख्न थाल्यो भने हामीले हाडजोर्नीसम्बन्धी समस्या देखिएको हुनसक्छ । यस किसिमको पीडा वा दुखाइ बढ्दै गयो भने हामीलाई बाथ रोगले समाएको पनि हुनसक्छ । त्यस्तै जाडो बढ्दै जाँदा दुखेका ठाउँमा चिसो हुँदै जाने पनि हुनसक्छ । घुँडा तथा जोर्नीको दुखाइबाट राहत पाउने सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको जाडोदेखि बच्नु नै हो । जाडो याममा न्यानो कपडा लगाउने, तातो सुप खानुपर्ने डा. पुनको सुझाव छ । यसका अतिरिक्त घरमै बसेर पनि निम्न उपायहरु अपनाउन सकिन्छ :
तोरीको तेलः तोरीको तेलमा लसुन मिसाएर हल्का तताउने । नियमित रुपमा तातो तेलले मालिस गर्ने । यसो गर्दा घुँडाको दुखाइ पक्कै कम हुन्छ ।